2020 जनगणना | संयुक्त राज्य अमेरिका जनगणना ब्यूरो
This isacondensed, translated version of the 2020 Census website in Nepali.
यो 2020census.gov को संक्षिप्त बनाइएको, अनुवादित संस्करण हो। अंग्रेजी र स्पेनिशको पूर्ण साइटमा फिर्ता जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
अहिले प्रतिक्रिया जनाउनुहोस्
Nepali / नेपाली ne
Component ID: #ti1177413917
2020 जनगणनामा कसती प्रतिक्रिया जनाउने
2020 जनगणनामा तपाईंको मार्गदर्शन
कागजी प्रश्नावली कसरी पूरा गर्ने जान्नका लागि निर्देशकहरू पढ्नुहोस्।
नेपाली	[1.6 MB]
हरेक घरका एकजना व्यक्तिले अनलाइनबाट वा फोन वा हुलाकबाट जनगणना पूरा गर्नुपर्छ। नयाँ जन्मिएका, साना बालबालिका र धेरै जसो आफूसँग सुत्ने साथी वा परिवार सदस्यहरू सहित आफ्नो ठेगानामा बस्ने सबैजनालाई गिन्ती गर्नुहोस्।
यदि स्थायी ठाउँ नभएको र अप्रिल 1, 2020 देखि यहाँ बस्ने कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, उक्त व्यक्तिलाई पनि गिन्ती गर्नुहोस्।
अनलाइनमा जनगणना गर्नुहोस्
अनलाइन प्रश्नावली अहिले उपलब्ध छ। यदि तपाईंलाई सहायता आवश्यक हुन्छ भने, तलका निर्देशिकाहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
2020 जनगणनामा मद्दतका लागि वा फोनबाट प्रतिक्रिया जनाउनका लागि, 844-330-2020 मा फोन गर्नुहोस्। फोनहरूको जवाफ अङ्ग्रेजी, स्पेनी, चिनियाँ, भियतनामीज, कोरियन, रसियाली, अरबी, टागालग, पोलिश, फ्रन्च, हैटियन क्रेओली, पोर्चगाली र जापानीमा दिइनछ।
2020 जनगणनाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्ने हरेक वयस्क, शिशु र बच्चालाई गिन्ती गर्छ। यो गणना हरेक दश वर्षमा सरकारी निकाय अर्थात यु.एस. जनगणना ब्यूरोद्वारा गरिन्छ
यो किन महत्त्वपूर्ण छ
Component ID: #ti155173577
हरेक वर्ष, सेवा, जनगणनाका डाटाका आधारमा करोडौं डलरका संघीय कोषहरू अस्पताल, अग्नी विभाग, विद्यालय, सडक र अन्य स्रोतहरूमा खर्च गरिएको हुन्छ।
Component ID: #ti203169863
जनगणनाको डाटाले कंग्रेसमा हुने हरेक सिटको निर्धारण गर्छ र तिनीहरूलाई मतदानका जिल्लाहरूका सीमाहरू कोर्न प्रयोग गरिन्छन्।
Component ID: #ti202361698
जनगणना गर्ने कार्य संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानद्वारा पनि आवश्यक छ: धारा 1 को उपधारा2मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले हरेक दश वर्षमा आफ्नो जनगणना गर्छ भनिएको छ। पहिलो गणना सन् 1790 मा भएको थियो।
तपाईंले उपलब्ध गराउनु हुने जवाफहरू तथ्याङ्कहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कानूनद्वारा जनगणना ब्यूरोले तपाईंका जवाफहरू सुरक्षित गर्न र तिनीहरूलाई कडा गोपनीयताका साथ राख्न आवश्यक पर्छ। वास्तवमा सबै कर्मचारी तपाईको व्यक्तिगत जानकारीलाई जीवनकालभर संरक्षण गर्न शपथ खाएका हुन्छन्।
यु. एस. संहिताको शीर्षक 13 मा, जनगणना ब्यूरोले तपाईं, तपाईंको घर वा तपाईंको व्यवसायलाई पहिचान गर्न सकिने कानकारी कसैलाई पनि अर्थात कानून प्रवर्तन निकायहरूलाई पनि खुलासा गर्न सक्दैनन्। कानूनले तपाईंको डाटा संरक्षित गरिन्छ र तपाईंका डाटालाई सरकारी निकाय वा अदालतद्वारा तपाईंका विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्दैनन् भनी सुनिश्चित गरेको छ।
तपाईंको छिमेकमा जनगणना लिने व्यक्ति
अर्को वर्षदेखि, तपाईंले आफ्नो छिमेकमा जनगणना लिने व्यक्ति देख्न सक्नुहुनेछ।
Component ID: #ti1666089543
यो 2020 जनगणनाको सामान्य भाग हो। तपाईंले आफ्नो छिमेकमा निम्न केही भिन्न कारणहरूले गर्दा जनगणनामाकाम गर्ने कर्मचारीहरू देख्न सक्नुहुनेछ:
तिनीहरू भनेका जनगणनाको तयारीको लागि ठेगानाहरू जाँच गर्ने हुन्।
तिनीहरू भनेका जनगणना वा अन्य जनगणना ब्यूरोको सर्वेक्षणका लागि घरमा भेटघाट गर्ने हुन्।
तिनीहरू भनेका जनगणना सम्बन्धी जानकारी दिने हुन्।
तिनीहरू भनेका जनगणनासँग सम्बन्धित काम जाँच गर्ने हुन्।
मे 2020 मा, सबैजनालाई गणना गरियो भन्ने सुनिश्चित गर्न 2020 जनगणनामा प्रतिक्रिया नजनाएका घरहरूमा जनगणना लिने व्यक्तिहरूले घरको भेटघाट सुर गर्नेछन्।
तपाईंले कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ
2020 को पूर्ण र यथार्थ गणना प्राप गर्ने कार्यमा सबैजनाको समर्थन आवश्यक पर्छ र मद्दत गर्नका लागि व्यक्ति, व्यवसाय, समुदाय र संस्थाहरूका लागि धेरै तरिकाहरू छन्।
Component ID: #ti1478617300
Component ID: #ti995525544
तपाईंले जनगणना ब्यूरोको समाचार र सुचनालाई आफ्ना साथी, परिवार र फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्रामका पछ्याउने व्यक्तिहरूलाई साझा गरेर हामीलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
Component ID: #ti881864779
Component ID: #ti483423921
Component ID: #ti520026294
हामीसँग साझेदारी गर्नुहोस्
सयौं संस्था, गैर-नाफामूलक, नीति-निर्माता र व्यक्तिहरूले 2020 जनगणना जनगणनाको बारेमा र हामी यसमा सहभागी हुन किन आवश्यक छ भनेर जानकारी फैलाइरहेका छन्।
हामीसँग सहभागी हुनुहोस्
Component ID: #ti1606631425
Component ID: #ti2030817773
Component ID: #ti850219443
सामग्रीहरू साझा गर्नुहोस्।
जनगणना ब्यूरोले समुदायहरूलाई संलग्न गराउनमा मद्दत गर्न 2020 जनगणना बारे शैक्षिक स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछ।
स्रोतहरू अन्वेषण गर्नुहोस्
इमेल अपडेटका लागि साइन अप गर्नुहोस्
तपाईंको इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्